डा. राम बहादुर बोहराको आजको तीतो अनुभव Nepalpatra डा. राम बहादुर बोहराको आजको तीतो अनुभव
डा. राम बहादुर बोहराको आजको तीतो अनुभव
१८ चैत्र २०७६, मंगलबार
घटना केहि दिन पहिला मोटरसाइकल एक्सिडेण्डको रहेछ । मोटरसाइकल एक्सिडेण्ट भएर टाउकोमा चोट लागेको छ । टाउकोको मेजर अप्रेसनको तयारी हुन्छ । अप्रेसन गर्नलाई अभिभावकको खाँचो हुन्छ । तर यता लकडाउन छ छ, स्थानीय प्रशासनले यस्तो दु:खद घडीमा भेट्न जान दिन इजाजत दिन मान्दैन ।
सरकारले जनताको सेवाको मर्म भुलेको छ । लकडाउन आवश्यक छ यो पनि भुल्नुहुदैन तर उता पनि विरामी एकदम सिरियस छ । समय सवैभन्दा मुल्यबान हुन्छ । बन्दको अर्थलाई दुई तरिकाले सोच्नुपर्छ । कहाँ के को आवश्यक छ भन्ने कुरामा जोड दिनुपर्छ ।
एउटा व्यक्तिगत स्वार्थमा र अर्को आकस्मिक घटनामा कुन आवश्यक छ । यस्ता विषयको अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी राज्यको हो । यस्ता कुरामा ध्यान जानुपर्ने थियो तर गएको देखिएन । मानिस के उद्धेश्य लिएर जादैछ भन्ने कुरा अनुसन्धानले देखाएको छ ।
देखीदेखी इजाजत दिन नमान्नु भनेको मान्छे मारे सरह ठहर्छ । नेपालमा रोग लागेर नभई लापरबाही र शक्तिको दुरुपयोगले मानिसको ज्यान गएको छ । आज नोबेल कोरोनाले मान्छे मरेका छैनन् तर लापरबाही भएमा मर्ने छन्, यसमा दुईमत छैन ।
यो घटनाले एउटा कुरा के देखाउछ भने नेपालमा मानवता समाप्त भएको छ । कलियुगले जरा गाड्दैछ । मानिसको मृत्युबरण गराउन मानिस नै लागेका छन् । के ठिक के वेठिक भन्ने कुरातर्फ भन्दा पनि आ-आफ्नो कानुन लादन मानिसले शक्तिको दुरुपयोग गर्दैछन् ।
नेपालमा मानवता समाप्त भएको छ । कलियुगले जरा गाड्दैछ । मानिसको मृत्युबरण गराउन मानिस नै लागेका छन् । के ठिक के वेठिक भन्ने कुरातर्फ भन्दा पनि आ-आफ्नो कानुन लादन मानिसले शक्तिको दुरुपयोग गर्दैछन् ।
एउटा दु:खी गरीवको कुरा सुन्ने यहाँ कोही छैन । यहाँ उपचार नपाएर मानिस त्यसै मर्दैछन् । यहाँ सुन्नेवाला कोही छैन । जसलाई जे पर्यो-पर्यो, उ मरोस् या बाचोस्, उ स्वयम्अ, अजर अमर भएर जन्मेको छैन तर पनि उ ठूलो मान्छे उसमा अहमता छ, घमण्ड छ ।
उ यो धर्तीको सवैभन्दा ठूलो सम्झन्छ । अरूको समस्या बुझ्ने मानिस हमेसा अगाडि हुन्छ, जसले घमण्ड गर्छ एकदिन उसलाई झन ठूलो समस्या आइलाग्न सक्छ । सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःख भाग्भवेत् । ॐ शान्ति: शान्ति: शान्ति: !
लकडाउन भनेको के हो ?
मानिसले किन घमण्ड गर्छन् ?
घमण्डले आफूलाई मात्र नभएर क्षति गर्छ अरूलाई पनि
इतिहास पल्टाउदा १९ अंकबारे यस्तो छ रोचक जानकारी
नेपालको जलस्रोतको सहि सदुपयोग गरे देश सम्पन्नशाली हुने
देशको विकास र सम्वृद्धिको लागि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने १२ बुँदाहरु
*डा. राम बहादुर बोहरा नेपाल वैकल्पिक चिकित्सा विकास परिषद नवलपरासीको अध्यक्ष, बरिष्ट आयुर्वेद डाक्टर, साइन्स इन्फोटेकका सल्लाहकार तथा नेपालपत्रको स्वास्थ्य स्तम्भकार तथा पत्रकार हुनुहुन्छ ।
कस्तो दुर्भाग्य ! बिरामी भएर ऐतिहासिक अवसर गुमाए खानेपानीमन्त्री थापाले
माया के लाई भन्दछन् ?
के तपाई जीवनमा खुसी रहन चाहनुहुन्छ ? यी कामहरु गर्नुहोस्
‘कोभिड-१९ पछि पूर्वीय दर्शनको सार्थकता बढ्यो’
प्रेम चाहेर होइन आफै हुँदो रहेछ
प्रधानमन्त्री ओली भन्छन्, ‘सबै मिलेर आए हुन्छ, एमाले एक्लै चुनाव…
सर्वोच्चले भन्यो, ‘न्यायाधीश बन्न नहकुल सुवेदीको योग्यता पुग्छ'(पूर्णपाठ)
काठमाडौं उपत्यकामा पछिल्लो २४ घण्टामा २११ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि
पछिल्लो २४ घण्टामा ५५९ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, १३८ जना…
हिमपहिरोमा परी दुईको मृत्यु